भारतमा विवाहका क्रममा विभिन्न कार्य`क्रमहरु हुन्छन् । यसमध्ये वरमाला एक हो । अहिले सा`माजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइ`रहेको छ, जहाँ वरमालाको स्टेजमा फोटो खिचाउँदा`खिचाउँदै थकित बनेका एक बेहुला निदाएका छन् । वरमालाको कुर्सीमा बस्दा`बस्दै दुलाहा निदाएपछि त्यहाँ उपस्थित भएका`हरुले उनलाई उठाउने कोसिस गरेका छन् । तर, ती व्यक्तिहरुले उठाउन खोज्दा पनि उनको निद्रा खुलेन । उनी कुम्भ`कर्ण जसरी गहिरो निद्रामा थिए । उनी`सँगै बसेकी दुलही भने ट्वाल्ल परेर यो सबै हेरिरहेकी छिन् । यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइ`रल भइरहेको छ । र, मानिसहरुले बेहुलाको निद्राको कारण जान्ने कोसिस गरिरहेका छन् । भारतमा कोरोना`कालमा बिहेमा सहभागी हुनका लागि मानिस|हरुलाई निश्चित कोटा तोकिएको छ । मापदण्ड`भन्दा धेरै संख्यामा पाहुना`हरू बोलाउन पाइदैन । त्यहीकारण मानिसहरुले अनलाईन वा युट्युबमै बिहेका भिडियोहरू हेरेर टिप
संसारमा विभिन्न किसिमका मानिसहरू छन् । त्यस्तै चोर हरु पनि अनौठो किसिमले चो`री गर्ने गर्छन् । रुसमा चोरहरुले रेलवे पुल नै चोरी गरेका छन् ।रुसको सुदूर उत्तरी आर्कटिक वृत्तमा पर्ने मुर्मान्स क्षेत्रमा रहेको एक रेलवे पुलको २३ मिटर खण्ड चोर`हरुले चो`री गरेका हुन् । ५६ टन वजनको उक्त पुलको खण्ड चो`री भएको विषयमा अदालतमा आपराधिक मुद्दा समेत दायर गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार|माध्यमले जनाएका छन् । मुर्मान्स शहरको दक्षिण`मा रहेको ओक्ट्या`ब्रास्कायाको वस्तीमा रहेको पुलको बीचको भाग गायब भएको बताइएको छ । तैपनि पुलको अगाडि र पछाडि`को भाग भने जस्ताको त्यस्तै छ ।स्थानीय बासिन्दा`ले अघिल्लो महिना उक्त पुलको खण्ड गायब भएको थाहा पाएका थिए । उक्त पुल यस`अघि ‘रेयर अर्थ’ पदार्थ ढुवानी गर्ने रे`लका लागि प्रयोग हुँदै आएकोमा सन् २००७ मा ‘रेयर अर्थ्’ पदार्थको उक्त कम्पनी टाट पल्टेपछि त्यस पुल प्रयोगविहीन
कोही मानिसका आकांक्षाह:रु विचित्रकै हुन्छन् । अहिले एकजना ४९ वर्षकी महि'लाको बिहेको कहानी निकै चर्चित ब'नेको छ । पूर्व स्विमसूट मोडेल एलिजा'बेथ होडले आफ्नै कुकुरसँग बिहे गरेकी छिन् । उनको कु'कुर लोग्नेको उमेर ६ वर्षको छ ।उनको बिहे स'मारोह विश्वका लाखौँ मानिसले हेर्न पाए । किनकि उनको बिहे:लाई बेलायतको चर्चित टेलि'भिजन शो द मर्निङ्गमा लाइभ प्रशारण गरिएको थियो । मिडिया रिपोर्टहरु'का अनुसार एलिजा'बेथ आफ्नो जिवनका'लमा कैयन् सेलिब्रेटीसँग अफेयरमा रहिन् । उनले २ सय जनाभन्दा धेरै पुरुषसँग डेट गरिसके'की छिन् । तरपनि उनले मन खाएको भेट्न सकिनन् । यतिधेरै सँग सम्बन्ध राख्दा समेत चित्त बुझ्दो नपाए'पछि उनले आफ्नै कुकुरसँग बिहे गरेकी हुन् । रोचक त के भने कुकुर'सँग बिहे गर्नुअघि अवि'वाहित नै रहेकी एलिजा'बेथको एकजना ब्वायफ्रेण्ड'सँगबाट एउटा छोरा पनि छ । उक्त छोराको उमेर नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ । अब
अहिले मङ्गल ग्रहमा व्यस्त'ताको समय छ। यो म'हिना रातो ग्रह नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। पृथ्वी र मङ्गल ग्रहको घुम्ने गतिमा रहेको फरकपनका कारण यी दुई ग्रह'बीचको दूरी निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले म:ङ्गल ग्रह सम्ब:न्धी कुनै लक्ष्य शुरू गर्न हरेक २६ महिनामा एकपटक मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसबेला यी दुई ग्रहहरू एकअर्का'को नजिक आइपु'गेका हुन्छन्। कैयौँले नासाको पर्सिभेरेन्स रोभर– जुन अहिलेसम्म मङ्गल ग्रहमा पठा:इएको सबभ'न्दा जटिल प्रविधियुक्त यान हो–१८ फेब्रुअरीमा त्यहाँ अवतरण गर्ला भन्ने आशा गरिरहेका छन्। सन् २०१६ मा पठाइ'एको एउटा उपक'रण कलर एन्ड स्टेरियो सर्फेस इमेजिङ सिस्टम (क्यासिस)को सहाय'तामा यो ग्रहको सतहबारे वैज्ञानिकहरूले विभिन्न जानकारी पाइरहेका छन्। यो क्यामेरा युरो:पेली अन्तरिक्ष निकाय इसा'को एक्जोमार्स ट्रेस ग्यास अर्बिटरसँग यात्रा गरिरहेको छ। यसले मङ्गलको वायुमण्डलमा रहेको मि
भारतको मात्रै नभई एसियाको सबैभन्दा धेरै धनी व्य'क्ति मुकेश अम्बानीबारे धेरै कुराहरु बा'हिर आउँदैनन् । अम्बानीका नोकरहरुका छोराछो'री पनि विदेशमा अध्यन गर्छन् । रिला'यन्स इन्डस्ट्री'जका सीएमडी मुकेश अम्बा'नी अहिलेको समय'मा विश्वकै पाँचौं धनी व्यक्ति हुन् । भारत सहित सिंगो एशि'यामा उनीसँग जति सम्प'ती छ त्यो अरुसँग छैन । उनी विश्वको सब भन्दा महँगो घरमा बस्छन् । यो घरको नाम एन्टिलिया हो । अम्बानी'को घर मुम्बईमा र'हेको छ । अम्बा'नीको घरभित्र विलासिता'का तमाम चीजहरू छन् । उक्त घरमा ति कुरा'हरु उपलब्ध छन् जसको बारेमा हामी कल्प'ना गर्न मात्र सक्छौँ । सञ्चारमा'ध्यमहरुमा अम्बानी परिवा'रको जीवनशै'लीको बारेमा सँधै छलफल हुन्छ । तर के तपाईं'लाई थाहा छ मुकेश अम्बा'नीको नोक'रले कति तलब पाउँछन् ? एन्टिलियामा करिब ६०० नोकर'हरू काम गर्छन् । जान'कारी अनुसार मुकेश र नीता अम्बानी नोकरहरुमाथि आफ्नै परिवा
तपाई हामी सबैको हात खुट्टामा ५ ५ वटा औला हुन्छन् । तर ब्राजि'लको ब्रासि'लियामा एउ'टा यस्तो परिवार छ जसका अधि'कांश सदस्यका हात खुट्टामा ६–६ वटा औंला छन् । २४ सदस्यीय डि सिल्भा परिवारका उक्त १४ सदस्यका हात'खुट्टा ६ औंले छन् । उक्त परिवारमा जन्मिएको नयाँ सदस्य'का पनि ६ वटा औँला नै भेटिएप'नि उक्त परिवारको चर्चा विश्वभर सुरु भएको छ ।आफू'हरुको जस्तो अद्वितीय पारि'वारिक चिनो दुनियाँका अरु परि'वारमा नभएको भन्दै उनीहरु अन्य भीडबाट फरक भएकोमा गर्व गर्छन् ।
छोरीको विवाह गर्दा केटा पक्ष'लाई दा'इजो दिने प्रथा हाम्रो समाजमा कुनै नयाँ हैन। हाम्रै देश'का केहि समुदायमा दाइजोको ना"ममा गाडी, पैसा दिने गरिन्छ। तर के तपा'ईले सुन्नु भएको छ कि दाइजो'मा वि-षालु सर्प पनि दिइन्छ। तपाई यो कुरा जानेर चकित हुन सक्नुहुन्छ तर यो कुरा सत्य हो। भारतको मध्य प्रदेश'को एक विशेष स'मुदायमा यो प्रचलन प्रचलित छ। मध्य प्रदे'शको गौरिया समुदा'यका मानिसहरुले आफ्नो छोरीको विवाहमा दाइजोका रूपमा २१ वटा वि-षालु सर्प दिने गर्छन्। यस समु'दायमा शताब्दीऔ देखि यो परम्परा च'ली आएको छ। उनीहरु'को यो विश्वास छ कि यदि यस समुदा'यका कुनै व्यक्तिले आफ्नी छोरीलाई बिहेमा दाइ'जोको रूपमा सर्प दिएन भने उसको छो'रीको विवाह छिट्टै टुट्छ। वास्तवमा यस समु'दायका मानिसहरुको मुख्य व्यव'साय भनेको नै सर्प समात्नु र मानिसहरू'लाई देखाएर पैसा कमाउनु हो। यही कारणले गर्दा छोरीको बुवाले सर्प दाइजोक
आफू'लाई कोरोना पोजेटि'भ देखिएको भन्दै घरबाट निस्कि'एका एक जना प्रेमीका'सँगै पक्रा'उ परेका छन् । कोरोना पोजेटि'भ देखिएको भन्दै श्रीमतीलाई ढाटेर घर'बाट निस्किेका उनी प्रेमिका'सहित पक्रा'उ परेका हुन्। घट'ना भारत ईन्दौंरको हो । भारतीय सन्चार माध्यम'काअनुसार कोभिड सेन्टर'मा भर्ना हुन भनि निस्केका श्रीमा'न सम्पर्क'विहिन भएपछि श्रीमतीले प्रह'रीलाई खबर गरेकी थिइन् । ईन्दौंरको ताजोलमा बस्ने २८ वर्षीय ती पूरुषले फोन गरेर आ'फूलाई कोरोना भएको बता'एका थिए । लामो समय श्री'मान सम्पर्कमा नआएपछि श्रीमतीले प्रहरी'लाई खबर गरेकी थिइन् । उनलाई खोज्न प्रह'रीले पहिलो चरणमा जिल्लाका सबै आइसोलेस'न सेन्टरमा खोजी शूरु गरेको थियो । तर लामो समय खोजेपछि उनी अन्तै भेटिए । पुरानो मोबाइ'ल नम्बर बन्द गरेको भए पनि नयाँ नम्बर लिएको खुलेपछि प्रहरी'ले ट्रेसिङ गरेको थियो । लोकेसनका आधारमा उनलाई प्रहरीले प'क्रन सफल
मलेशियामा एक युवकले आफ्नो हराएको फोन फेरि भेटिँदा त्यसमा बाँदरले खिचेका सेल्फी र भिडियाे फेला प'रेको बताएका छन् । मलेशियाकाे दक्षिणी राज्य जोहोरको बाटु पाहाट'मा जाक्रिद्ज रोद्जी नामक २० वर्षीय एक विद्यार्थी'ले बाँदरले फोन खा'न खोजे जस्तो देखिने भिडियाेसहित सामग्रीहरू ट्विटरमा हाले'का छन् । अहिले उक्त फाेटाे र भि'डियाे सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाे छ । भिडि'याेमा त्यही दिन दिउँसो २:०१ बजे एउटा बाँदरले फोन खान खोजे जस्तो देखिन्छ । त्यसमा उक्त बाँद'रले फोनको क्या'मरामा ट्वाल्ल परेर हेरेको र हरिया पातको पृष्ठभू'मिमा काग कराएको सुनिन्छ। रोद्जीले आइ'तवार दिउँसोसम्म फोन नभेटिएको तर आफ्ना पिताले घरबाहिर एउटा बाँदर देखेप'छि आफ्नो नम्ब'रमा फोन गर्दा घरप'छाडि जङ्गल'मा घण्टी बजेको सुनिएको बताए । खोज्दै जाँदै हिलो लागेको फोन पामको रूखमुनि पातहरूले छोपिएको अवस्थामा भेटि:एको थियो। एक आफन्तले
नुहाए'पछि हाम्रो शरिर'को केही हिस्सा'को छाला खुम्चिने गर्छ। हात, हत्केला, औला'को छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउ'रिएझै हुन्छ। आखिर यसको कारण के हो ? - केही व्यक्ति बायोकेमिकल प्रतिक्रियाको कारण यस्तो हुने बताउँछन्। पानीमा रहँदा हाम्रो छालाबाट सामान्य भन्दा अधिक कोष बाहिर निस्कन्छन्। जसले गर्दा छाला खुम्चिन पुग्छ। तर वैज्ञानिक भन्छन्, यो केवल ओस्मोसिस मात्र होइन। वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् कि छाला'को जुन हिस्सा चाउरी परेको छ, यदि त्य'हाँको केही नसा काटिदिने हो भने त्यसरी चाउरी पर्दैन। यसको मतलब चाउरी परेको छाला यो देखा'उछ कि हाम्रो स्नायु प्रणा'ली बिल्कुल ठिक काम गरिरहेको छ।अमेरिकी वैज्ञा'निक मार्क चान्गिजी भन्छन् कि हाम्रो शरिर बदलियको वातावरण अनु'सार आफु'लाई पनि परिव'र्तन गर्दछ। पानीमा छाला चाउरी पर्नु पनि त्यहि हो, कि हामी चीजहरु'लाई ठिक ढंगले समा'उन सकौं। सन् २०११ मा मार